Halyayga reer Weles ee John Toshack oo kala taliyay Ramsey inuusan ku celinin qalad uu horey u sameeyay Gareth Bale – Gool FM
Halyayga reer Weles ee John Toshack oo kala taliyay Ramsey inuusan ku celinin qalad uu horey u sameeyay Gareth Bale
Dajiye January 6, 2019
(Yurub) 06 Jan 2019. Halyayga reer Weles ee John Toshack ayaa kala taliyay Aaron Ramsey inuusan sameynin qalad la mid ah kii uu sameeyay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Gareth Bale.
Waxaa jira warar badan ee ku aadan in Aaron Ramsey uu go’aansaday in beeca xurta ah uu ugu dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Juventus, kadib dhamaadka xili ciyaareedkan, marka uu soo idlaado qandaraaskiisa.
John Toshack ayaa wareysi uu ku bixiyay “La Gazzetta dello Sport” wuxuu kaga hadlay arinta ku aadan Aaron Ramsey wuxuuna yiri:
“Aaron Ramsey wuxuu mar walba ahaa ciyaaryahan tayo leh, lakiin ma aqaano hadii uu yahay xidig dhab ah”.
“Haatan wuxuu u ciyaaraa koox weyn, dhawaan wuxuu ku biiri karaa koox kale ee weyn, tani waxay muujineysaa inuu heysto tayo badan, xitaa haddii aanan u ogeyn, booska uu ku fiican yahay ilaa iyo haatan, tani waa arin ay tahay in Juventus ay si dhakhso ah u sharaxdo”.
“Ma aqaano haddii uu Aaron Ramsey ku wanaagsan yahay ka ciyaarista booska ka horeeya difaaca, sidoo kale ma hubo inuu in ku filan gool ku dhalin karo aaga u dhow weeraryahanada, balse waxaa laga yaabaa inuu ku fiican yahay ka ciyaarista khadka dhexe ee ka kooban saddex ciyaaryahan”.
“Wuxuu heystaa fursad aad u qaali ah uu kaga garab ciyaari karo Cristiano Ronaldo, hadii uu hormar sameeyo, waxay tani nasiib u tahay da’ayarkan aan nasiibka laheyn”.
“Waa muhim in Ramsey uusan sameynin qalad la mid ah kii uu Gareth Bale ku sameeyay kooxda Real Madrid, wuxuu u baahan yahay in ugu horeyn uu sida ugu dhaqsida badan ku barto luqada maxaliga ah, taasina waxay noqon kartaa sababta ay ugu fiican tahay inuu ku biiro Juventus suuqa xagaaga, halka uu ugu dhaqaaqi lahaa bishan Janaayo”
“Kulanka Tottenham Hotspur waa imtixaankeyga ugu horeeyay” – Tababare Solskjær
Milkiile Roman Abramovich ma dooneyn inuu IIBSADO Chelsea ee wuxuu doonayay Arsenal....(Sidee wax u dheceen?)